Dhizaini Yemitambo Kukurukurirana kunozivisa nezvechikonzero nemhedzisiro, chii chinotitungamira kuita zviito, izvo isu tingadai tisina kufunga kuti zvinogoneka. Nekuisa vateereri kutenderedzwa tafura yakakomberedzwa, sedare reEurope, ndaida kugadzira kamuri inowanikwa nevateereri, inopindirana uye inoratidza nezve chikamu chavo munzira.
Kugarisa Kune Vanotakura Mafambiro
Kugarisa Kune Vanotakura Mafambiro Door Stops kubatana pakati pevagadziri, maartist, vatambi uye vagari venharaunda kuti vazadze nzvimbo dzeruzhinji dzakasiiwa, senge mafambiro uye nzvimbo dzisina vanhu, paine mukana wekuita kuti guta rive nzvimbo inonakidza kuve. Yakagadzirirwa kupa nzvimbo yakachengeteka uye inonakidza inofadza neimwe kune iripo, mauniti anoiswa nekuratidzwa kwakakura kweveruzhinji art yakapihwa kubva kuimba dzekuno, kugadzira nzvimbo inozivikanwa, yakachengeteka uye inonakidza yekumirira vatasvi.
Gadziriro Yevhesi Uye Pfungwa
Gadziriro Yevhesi Uye Pfungwa HAIRCHITUREURE zvinobuda kubva kusonganirano pakati pevhudzi vhudzi - Gijo, neboka revagadziri vezvipenga - FAHR 021.3. Inokurudzirwa neEuropean Capital of Tsika muGuimaraes 2012, vanokurudzira zano rekubatanidza nzira mbiri dzekugadzira, Architecture & Hairstyle. Iine hutsinye hwekuvaka dhizaini mhedzisiro yacho inoshamisa bvudzi nyowani rinoratidza kushandurwa kwebvudzi mune zvachose kushamwaridzana nevakavaka zvivakwa. Mhedzisiro dzakaratidzwa dzakashinga uye dzakasarudzika chimiro nekududzirwa kwakasimba kwazvino. Kushandira pamwe uye hunyanzvi zvaive zvakakosha kuti ashandure vhudzi rinoratidzika kunge rakajairika.
Riini Photoinstallation Dhizaini Yemitambo Kugarisa Kune Vanotakura Mafambiro Gadziriro Yevhesi Uye Pfungwa Kalendari